Vaovao - fahalalana an'arivony an'arivony! Inona no fantatrao?
Fahalalana fanontana an'arivony! Inona no fantatrao?
Raha mbola mifanipaka mifanaraka amin'ny refy ny loko R + G + B dia misy loko am-polony tapitrisa mahery. Fa maninona no mainty? Ny Black dia azo vokarina rehefa mitovy ny tahan'ny RGB, fa mitaky ink telo mba hamoahana loko iray, izay tsy azo atao amin'ny fomba fijery ara-toekarena. Raha ny marina, ny mainty dia ampiasaina betsaka amin'ny fizotry ny famolavolana, izay no tena antony anaovana pirinty miloko efatra. Mbola misy teboka iray hafa ihany koa: raha ny mainty novokarin'ny RGB dia ampitahaina amin'ny mainty mifangaro mivantana amin'ny ranomainty, dia manana fahatsapana tsy misy dikany ilay teo aloha, fa ilay farany kosa mavesatra kokoa.
1. Miaraka amin'ny fitsipika misy loko efatra dia mora kokoa amin'ny olon-drehetra ny manaiky. Izy io dia mitovy amin'ny sarimihetsika efatra mandritra ny famoahana, ary mitovy amin'ny fantsona efatra an'ny cyan, magenta, mavo ary mainty (C, M, Y, K) ao amin'ireo fantsona ao amin'ny PHOTOSHOP ihany koa. Ny fanovana ny fantsona rehefa manodina ny sary dia fiovana amin'ny horonan-tsary.
2. Meshes, teboka sy zorony, harato fisaka ary harato mihantona. Harato: isaky ny santimetatra toradroa, ny isan'ny teboka apetraka, 175 bolongana ho an'ny zavatra pirinty mahazatra, ary 60 bolongana hatramin'ny 100 metatra ho an'ny gazety, miankina amin'ny kalitaon'ny taratasy. Ny pirinty manokana dia manana meshes manokana, miankina amin'ny firafiny.
1. Ny endrika sy ny maha-marina ny sary
Ny fanontana offset maoderina dia mampiasa pirinty offset (fanonta printy efatra), izany hoe mizara loko efatra ny sary miloko: cyan (C), vokatra (M), mavo (Y), sarimihetsika teboka efatra-loko mainty (B), ary avy eo pirinty Ny takelaka PS dia pirinty inefatra amin'ny paositra iray, ary avy eo dia vokatra vita pirinty miloko.
Ny fanontana sary dia tsy mitovy amin'ny sary aseho amin'ny solosaina mahazatra. Ny sary dia tsy maintsy atao amin'ny maody CMYK fa tsy ny maody RGB na fomba hafa. Rehefa mivoaka, dia avadika teboka ny sary, izay ny refy: dpi. Ny mari-pahaizana farany ambany indrindra amin'ny sary momba ny fanontana dia tokony hahatratra 300dpi / pixel / inch, ary ireo sary mahafinaritra hitanao matetika amin'ny solosaina dia matetika no mahatsapa tena tsara tarehy eo amin'ny monitor. Raha ny marina, ny ankamaroan'izy ireo dia sary maody 72dpi RGB, ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsy azo ampiasaina amin'ny fanontana. Ireo sary nampiasaina dia tsy tokony haseho ho toy ny fenitra. Aza mieritreritra fa ny sary dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana pirinty satria kanto amin'ny alàlan'ny acdsee na rindrambaiko hafa izy ireo, ary tsara tarehy aorian'ny fanamafisana. Tokony hosokafana amin'ny photoshop izy ireo, ary ny haben'ny sary dia ampiasaina hanamafisana ny maha-izy azy. Fahamarinana. Ohatra: sary misy vahaolana 600 * 600dpi / pixel / inch, avy eo ny habeny amin'izao dia azo lehibe kokoa mihoatra ny avo roa heny ary ampiasaina tsy misy olana. Raha 300 * 300dpi ny fanapaha-kevitra dia azo ahena fotsiny izany na tsy azo hitarina ny habe tany am-boalohany. Raha ny valin'ny sary dia 72 * 72dpi / pixel / inch, dia tsy maintsy ahena ny habeny (ny dpi marina dia ho lehibe kokoa), mandra-pahatongan'ny 300 * 300dpi ny fanapaha-kevitra dia azo ampiasaina. (Rehefa mampiasa an'io fiasa io ianao dia apetaho ilay singa "Redefine Pixel" amin'ny safidin'ny haben'ny sary ao amin'ny Photoshop.)
Ny endrika mahazatra dia: TIF, JPG, PCD, PSD, PCX, EPS, GIF, BMP, sns rehefa mandrafitra, loko TIF, bitmap mainty sy fotsy, vector EPS na JPG
2. Ny lokon'ilay sary
Mikasika ny teny matihanina sasany toy ny fanontana amin'ny takelaka, ny fanoratana an-tsoratra, ny fisokafana ary ny lokon'ny loko amin'ny fanontana, azonao atao ny manondro ny sasany amin'ireo fotokevitra fanontana mifandraika amin'izany. Ireto misy saina tsotra fotsiny izay tsy maintsy tandremana.
Misy tsipika tarehintsoratra manga voatsindry eo amin'ny takelaka mavo ambany, noho izany amin'ny takelaka mavo amin'ny sarimihetsika, tsy maintsy foana ny toeran'ny tarehin-tsoratra manga. Ny mifanohitra amin'izany dia marina ihany koa ho an'ny kinova manga, raha tsy izany ny zavatra manga dia hatao pirinty mivantana amin'ny mavo, hiova ny loko, ary ho lasa maitso ny toetra manga voalohany.
Misy tsipika tarehin-tsoratra mainty nopetahana tamina takelaka mena iray, avy eo ny toeran'ny tarehintsoratra mainty eo amin'ny takelaka mena amin'ny sarimihetsika dia tsy tokony hosokafana. Satria ny mainty dia afaka mitazona ny loko rehetra, raha mivoaka ny atiny mainty, indrindra ny lahatsoratra kely sasany, ny lesoka kely amin'ny fanontana dia hampiharihary ny sisin'ny fotsy, ary ny fifanoherana mainty sy fotsy dia lehibe, izay mora hita.
3. Mainty loko efatra
Olana mahazatra ihany koa io. Alohan'ny hamoahana azy dia tsy maintsy jerenao raha ny takelaka mainty ao anaty fisie publication, indrindra ny pirinty kely, dia eo amin'ny takelaka mainty ihany, ary tsy tokony hiseho amin'ireo takelaka misy loko telo hafa. Raha miseho izany dia hihena ny kalitaon'ny vokatra vita pirinty. Rehefa navadika ho sary CMYK ny sary RGB, dia ho lasa loko mainty efatra ny soratra mainty. Raha tsy voalaza manokana dia tsy maintsy alamina alohan'ny hamoahana ilay sarimihetsika.
4. Ao amin'ny maody RGB ny sary
Rehefa mamoaka sary amin'ny maody RGB, ny rafitra RIP amin'ny ankapobeny dia mamadika azy ireo ho maody CMYK ho an'ny vokatra. Na izany aza, ny kalitaon'ny loko dia hihena be, ary ny vokatra vita pirinty dia hanana loko maivana fa tsy mamiratra, ary ny vokany dia ratsy be. Ny sary dia navadika ho maody CMYK tsara indrindra amin'ny photoshop. Raha sora-tanana notarafina izy io dia tsy maintsy mandalo ny fizotran'ny fanitsiana loko alohan'ny hampiasana ny sary.